Laptop brand တွေရဲ့ pros and cons တွေပြောပြပေးပါ။ - MYSTERY ZILLION
Laptop brand တွေရဲ့ pros and cons တွေပြောပြပေးပါ။
July 2009 edited February 2010 in Laptops & Notebooks Sale
ကျနော် အခု Laptop တစ်လုံးဝယ်ဖို့ပါ။
Brand တစ်ခုစီရဲ့ အားနည်းချက် အားသာချက်လေးတွေကို သိတဲ့သူတွေပြောပြပေးပါ။
လောလောဆယ် Popular ဖြစ်နေတဲ့ထဲက(ကျနော်သိရသလောက်)
Hp, Dell, Asus တွေရဲ့အကြောင်း(အားနည်းချက် အားသာချက်လေးတွေ) ကိုပြောပြပေးကြပါ။
HP (Compaq) Presario CQ45-119TX (Core2Duo P8400 2.66GHz) 14.0" WXGA
DELL Studio 14 Laptop (Intel Core2Duo Processor T8300, 2.4GHz) 14.0" WXGA
ASUS F8Vr24PYH32DPM (Core2Duo P8600 2.4GHz) 14.1" WXGA
ကျန်တဲ့ Memory, Hard disk, Graphic Card, Sound Card, Battery, Wireless Modern နဲ့ Price စတာတွေက သိပ်မကွာဘူး ဆိုရင် ဘယ်ဟာကိုစဉ်းစားသင့်လဲ ဆိုတာ ဝိုင်းပြီးအကြံပေးကြပါခင်ဗျာ။ ဒီ Brand တွေထဲက တခြား သင့်တော်မယ့် Model လေးတွေရှိရင်လဲ စဉ်းစားပေးကြပါခင်ဗျာ။ ကျနော်အနေနဲ့ S$ 1500 ဝန်းကျင်လောက်သုံးဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :77: :77: :77:
i dont know other brand ,i know about ASUS laptop because i am using now and this asus is shit really shit product because this laptop fan is so noisy after i bought 3month later
this is my really own experience
my asus is pro50 series
grafik ati hd3470
really bullshit laptop
and i think some HP also very noisy fan and they dont have built in micro phone.i dont know about dell
i have another computer ACER extensa 5220 it really perfect for me because it have really nice recovery funtion
ကျနော်လည်း laptop တစ်လုံးလောက်လိုတာ ... အများကြီးတော့မသုံးနိုင်ဘူး... ထွက်တာသိပ်မကြာသေးတဲ့ suzuki laptop တွေရော ဘယ်လိုနေလဲမသိဘူး။ သူ့ spec နဲ့ စျေးနဲ့ဆို တန်တယ်လို့ထင်ရတယ်။ Core2Duo, DDRII 2GB, 250GB, လောက်ဆိုရင် 650000 လောက်ပဲကျတယ်ဆိုတော့ ... သိတဲ့သူများ အကြံပေးပါဦး... brand အသစ်ဖြစ်နေတော့ သိပ်မသိဘူး ...
ကို Phoenix ရေ... ဒေါ်လာ 1500 လောက်အကုန်ခံဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုမှတော့...
hp,dell,asus တွေဘာလို့စဉ်းစားနေတာတုန်းဗျ..။ Sony သာကိုင်ထုတ်လိုက်တော့..။
ကျန်တာတွေတော့ မသိဘူးဗျ။ ကျွန်တော်သုံးတာကတော့ asus pro50series ပါပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆လလောက်က ၀ယ်ထားတာပါ။ function လည်း finger print မပါတာကလွဲရင် တော်တော်စုံပါတယ်။ Face detection တောင်ပါသေးတယ်။ သုံးရတာလဲ အဆင်ပြေတယ်။ ဈေးတွေ၊ specification တွေ သိပ်မကွာဘူးဆိုရင် warranty ကိုလည်း ကြည့်ကြည့်ပါဦး။ International warranty ၂ နှစ် တော့ ပါသင့်တယ်။ ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့ ASUS က ကျန်တာတွေလောက် ဒီဇိုင်းသိပ်မလှဘူး။ ကျွန်တော် ၀ယ်တုန်းကတော့ ဒီဇိုင်းကို အဓိကမထားလိုက်ဘူး။ ဈေးနှုန်းနဲတာရယ် memory များတာရယ် (ကျန်တာတွေကသိပ်မကွာလို့) ပဲ ကြည့်ပြီး asus ကို ရွေးလိုက်တာ။ အရွေးမှန်ပါစေ။
PS: သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်တော့ dell ၀ယ်ပြီး ၂ ပတ်လောက်ရှိသေးတယ်။ စက်မတက်တော့လို့တဲ့။ ဆိုင်ကိုပြန်သွားတော့ register မလုပ်လို့ လို့ပြောတယ်။ ပြီးတော့ service center ကို ဖုန်းခေါ်ပြီး ပြောခိုင်းတယ်။ နောက်ဆုံးရွေးရခက်နေရင် customer care ကောင်းမယ်ထင်တဲ့ brand သာ၀ယ်သင့်တယ်။ :39:
ကျွန်တော်ကတော့ လက်တော့မှာ ဆိုနီကိုအမုန်းဆုံးပဲ။ သူကလှတာရယ် ပေါ့တာရယ်ပဲရှိပြီး စျေးပိုတောင်းထားတယ်လို့မြင်တယ်ဗျ။ အကြမ်းမခံဘူး။ အထူးသဖြင့် power ပိုင်းပြဿနာရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်။ DELL နဲ့ HP/Compaq ကမာမယ်လို့ထင်တယ်။ စျေးကြီးပြီးအကောင်းဆုံးကတော့ Apple Mac Book Pro ပဲ။ ၁၅၀၀ လောက်တတ်နိုင်ရင်ဝယ်လို့ရတယ်။ အလယ်အလတ်တန်းစားမှာတော့ ခုစျေးကွက်ထဲမှာ Compaq CQ45 Series ထဲကဆိုမဆိုးပါဘူး။ Windows Genuine မပါတာကစျေးပိုသက်သာတယ်။ စျေးကွက်အခေါ် Free DOS ပေါ့။ Fingerprint မပါတာကလဲသက်သာတတ်တယ်။ Memory နဲနေတာကတော့ ကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး ထပ်တိုးလို့ရပါတယ် စျေးလဲများဘူး။
ကျွန်တော် အဓိကကကြံပေးချင်တာက စျေးကြီးတိုင်းမကောင်းပါဘူး။ :67:
I mean S$1500, but not $1500. please don't kidding me. By the way, although sony viao is famous, it's appearance is easy to be damaged.
Thank Ko Yaung Sein, u have the same idea with me. But I don't know where to find the laptop that you have said, without Window Genuine. That musn't beapackaged new one, I think.:106:
Laptop ဆိုလို့ဝင်ရှုပ်အုန်းမယ်။ ကျနော်က laptop စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့လူတိုင်းကို လိုက်ဝယ်ပေးလေ့ရှိတယ်။ ဝါသနာ
Phoenix က Sg ကျွန်းလေးပေါ်ကပဲထင်တယ်နော်။
Compaq ကအရမ်းပျော့တယ်ဗျ။6months လောက်ဆိုရင် တစ်ခုချင်းပျက်တတ်တယ်။ အဲဒါထက်ဆိုးတာက Hardware performance ညံ့တယ်။ Hardware spec ချင်းတူရင် Compaq ကပိုနှေးလေ့ရှိတယ်။ စျေးတော့ နည်းနည်းသက်သာတယ်။ Acer လည်းထိုနည်းလကောင်း။ ကျနော့ပတ်ဝင်းကျင်မှာ Acer ကိုအကောင်းပြောတာမကြုံသေးဘူး။ Service ကလည်း သေခြာရှင်းပြလေ့မရှိဘူးဗျ။ HP ကတော့ Compaq ထက်ပိုကောင်းတယ်။ မဆိုးဘူး။ သူ့စျေးနဲ့သူ တန်တယ်။ စျေးလည်းသိပ်မကြီးဘူးဗျာ။ Support ကတော့ ကျနော်အမုန်းဆုံး support။ ဖုံးဆက်ရင် နာမည် IC number . phone number. company name. blah blah personal information တွေမေးပြီး5mins လောက်မှ what can i help you စတယ်။ သူမေးတာဖြေပြီးရင် မောနေပြီ။ Viao က performance မှာကောင်းတယ်။ ယောက်ကျားလေးနဲ့တော့ မကိုက်ပါဘူးဗျာ။ လှတယ်။ မမာဘူး။ လျှောက်သယ်မသွားရင် အရမ်းကောင်းတယ်။ Budget နဲ့တော့မကိုက်ဖူး။
Phoenix ရဲ့ budget ထဲမှာဆိုရင် Lenovo သို့မဟုတ် Fujitsu အကြံပေးချင်တယ်။ Lenovo ကပိုစျေးသက်သာတယ်။ Design တော့ တုံးတာပေါ့ဗျာ။ အကြမ်းခံတယ်။ Lenovo ဆိုရင် ပိုစျေးသက်သာတော့ Hardware spec နည်းနည်းပိုရတယ်။ နဲနဲပိုကြည့်ချင်ရင်တော့ Dell နဲ့ Asus။ ဟိုနှစ်ကောင်လောက် အကြမ်းမခံဘူး။
ဒီကျွန်းလေးပေါ်ကဆိုရင် IT show စောင့်လေဗျာ။ March IT show တုန်းက Lenovo တစ်လုံး Centrino2tech PE8600, DDR3 4GB, Nividia GEforce ဘယ်လောက်မှန်းမသိတော့ဘူး ကျနော 1560S$ ပဲပေးရတယ်။ Ygn ကိုပြန်ရောင်းလိုက်တယ် 350 မြတ်တယ် ဟီး
Edited: Laptop ဆိုလို့ဝင်ရှုပ်အုန်းမယ်။ ကျနော်က laptop စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဝယ်မယ်ဆိုတဲ့လူတိုင်းကို လိုက်ဝယ်ပေးလေ့ရှိတယ်။ ဝါသနာ
Edited: မေ့သွားလို့ဗျာ window မလိုချင်ရင် SimLim မှာဝယ်။ ပုံမှန်က windows မပါတာ Netbookတွေပဲရှိတယ်။ မေးကြည့်ရင်တော့ ရှိရင်ရှိမယ်။
Dell နဲ့ HP/Compaq မှာတော့ Ubuntu နဲ့လာပါတယ်။ Acer တို့ တခြားလက်တော့တွေမှာလဲ Linux base OS တခုခုနဲ့လာပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာကတော့ XP တင်ပြီးပဲရောင်းပါတယ် Free DOS လို့ပြောရောင်းတယ်။ အဲဒီမှာဆိုရင် Linux နဲ့လိုချင်တယ်ဆိုပြီး ရှာကြည့်ပါလား၊ ရမှာပါ။
I want to advise you to Google "LAPTOP BRAND/model user's review"
You will see many search result.
Personally,I recommend HP/Compaq,if you live in SG because of their customer care.
ကျွှန်တော့် laptop ရဲ ့battery type (3 cell,6 cell)သိချင်လို ့ပါ။
hp dv2000 ပါ။
ပြီးတော့ RAM 1G ပါ။ထပ်တိုးချင်လို ့ဘယ်မှာ၀ယ်သင့်လဲ အကြံပေးပါအုံး။
ူူlaptop နဲ ့ပတ်သက်ရင် ဘယ်ဆိုင်ကောင်းလဲ ညျွှန်ပေးပါအုံးနော်။
Battery type ကို ဦးဂူဂဲမှာမေးကြည့်လိုက်ပါ။:D အများစုကတော့ ၆တောင့်ပါတာပဲ။ ၃တောင့်ကတော့ နဲပါတယ်။:39:
ကျနော့ကို အားလုံးဝိုင်းအကြံပေးကြတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်အခု Hp Pavilion dv4-1413tx လေးကိုဝယ်ဖြစ်သွားတယ်။
specs ကတော့ core2duo 2.53 P8700, 4G DDR2, 320 G HHD, 512 MB Nvidia Gforce G 105 M dedicated ပါ။ Fingerprint လေးတော့မပါဘူးပေါ့ဗျာ။ သူ့ကို $1499 ပေးခဲ့ရတယ်ဗျ။ သူ့တန်ကြေးနဲ့ပစ္စည်း ဘယ်လိုမြင်လဲ ပြောကြပါအုံးနော်။
ကိုမီးငှက် ဝယ်လိုက်တဲ့ လက်တော့ specification ကိုဒီမှာတွေ့ရပါတယ်
အားလုံးကောင်ပါတယ် တန်ပါတယ်။ CPU သာ2GHz နဲ့ဆိုရင် စျေနှုန်းသိသိသာသာလျော့နိုင်ပါတယ်။ FSB ကတော့ 800MHz လောက်ရောက်သွားတာပေါ့။ ခုစက်က Windows Genuine ပါတဲ့အတွက်လဲစျေးကောင်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်။ Function နဲ့ feature ကတော့ ပြောစရာမရှိပါဘူး အားလုံးကောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတင်ဝယ်လိုက်တာက Compaq Presario CQ45-316TX ကို ၈၂၀၀၀၀ ပေးရတယ် (စင်ကာပူလိုဆို ၁၀၀၀လောက်ရှိမှာပေါ့)။ ဟီး နဲနဲဖြုန်းလိုက်တယ် နောက်ဝင်ဒိုးကျရင်မတင်နိုင်မှာစိုးလို့။
သူ့ရဲ့ Specification ကတော့ ဒီမှာပါ။ Windows တန်ဖိုးမပေးရတာ၊ CPU နဲ့ Graphic Chipset ကလွဲရင်ကျန်တဲ့ အခြေခံအတူတူပါပဲ။ :D
ကျွန်တော်ကတော့ အခုသုံးနေတဲ့ Laptop ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၁နှစ်ခွဲလောက်ကဝယ်တာဗျ။
US ကမှာလိုက်တာ $1200 ကျသွားတယ်ဗျာ။
အခုတော့အလွန်ဆုံးရှိ $800 ပေါ့ဗျာ။
Toshiba U305/S7448 ပါ
2GB RAM DDR II 667
Graphics - Intel 965 Express Chipset Family 358MB
အကြမ်းတော့ခံတယ်ဗျ။ ၃ပေ လောက်ကနေ ပြုတ်ကျတာ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ (တော်သေးတယ် ဟီးဟီး)
Toshiba M600 Series ပါ။ အခုတော့ ဟောင်းပြီပေါ့။ ကြာခဲ့ပြီကိုး :P
အခန်းက တိတ်နေတဲ့အချိန် Gtalk ကစကားပြောရင် ဟိုဘက်ကတောင် ပန်ကာသံကြားရတယ်။
ကောင်းတာဆိုလို့ သာမာန် laptop တွေထက် ပိုသေးပါတယ်။ စျေးမဆိုးပါဘူး။
အဲ့ဒါဆိုရင် ဂိမ်းတော့ တော်တော်ကစားလို့ ကောင်းမယ် :d
ကျွန်တော် တော့ COMPAQ Presario V2000 ၀ယ်ထားတာနည်းနည်းတော့ ကြာပါပြီ။
Good Second ဟန်း ၀ယ်တာပါ။ တော့ တော် ကို အကြမ်းခံပါတယ်။ သူက သုံးရတာ အဆင်ပြေတယ်။ Mobile technology Centrino 1.60 GHz,512, VGA128, Wlan,card reader, Firmware, BT, ဒါပေမယ့် HDD ကတော့ 60G ဘဲရှိတယ်....:2::2::2:
ကျွန်တော်ကတော့ Toshiba ကြိုက်တယ်ဗျာ။
Laptop တွေကတော့ သုစျေးနဲ့သူ မဆိုးပါဘူးလို့ပဲပြောရမှာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် Sony တော့မသုံးနိူင်ဘူးဗျ၊ သူကဘောစိ တွေမှကိုင်နိူင်တာ။
hey in my opinion hp pavilion series products shouldn't buy. Because I bought hp pavilion dv2000 series last year. I got 1 year warranty. After 1 year, my laptop's Nvidia graphic chipset was burnt. So I repaired it. I spent on it $300 for repairing. It had been ok until last month. Now lcd error happen again. Now I bought prolink netbook. I do really want to spell hp company like f*** the company. So Beware, Don't buy hp pavilion series
ကျွန်တော့ Laptop လေးကတော့ ကောင်းလည်းကောင်း စျေးလည်းသက်သာတယ်ဗျို့။
Brand ကတော့ Acer (Dual Core 2.1, 1GB, 250 GB, Graphic 256,8XDVD 14" ) ပါဗျို့...
အနော်ရောပဲ အကြမ်းခံသလိုပဲနော် စိတ်ထဲကထင်တာကိုပြောတာ
Sony လိုတော့မလှဘူးဗျ ပုံနည်းနည်းတုံးတယ်
ဟုတ်ပဗျာ း။ ကျွန်တော်လည်း အသေမုန်းပဲ ။ အစ်ကိုပြောတဲ .အတိုင်းပဲ သူတို.တွေက တကယ်ဂျင်းထုတယ် ။ ဘယ်လောက်ပဲ ပစ္စည်းတွေက အကောင်းသုံးပါစေ ။ တခြား brand တွေနဲ .စာလိုက်ရင် သူတို.တွေက တကယ်ရိုက်စားတွေဗျ။ မပြောချင်ဘူး ။
ကျွန်တော်ကတော. acer ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲ ။ သူတို.တွေကစျေးလည်းမှန်တယ် ။ ၀ယ်ရတာလည်းတန်တယ် ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း service ကောင်းကောင်းရတယ် ။ မြန်မာပြည်ကသူတွေအသုံးအများဆုံးပဲ ။ HP တို. Asus တို. Dell တို.က ၁၂ သိန်းလောက်မှ အကောင်းရတဲ. အချိန်မှာသူတို. က ၈သိန်းလောက်နဲ.တင် ကောင်းကောင်းသုံးလို.ရနေပြီ ။အခုဆို aspire 4937Z လေးဆို ၇သိန်းမပြည်တစ်ပြည်.နဲ .ရနေပြီ ။ ကျွန်တော်ကတော. မြန်မာပြည်မှာ laptop ၀ယ်မယ်ဆို Acer ကိုပဲ ထောက်ခံတယ်ဗျာ ။
ကျွန်တော့ Acer (Dual Core 2.1, 1GB, 250 GB, Graphic 256,8XDVD 14" ) E-machine လေးကတော့...
၄ သိန်း ၄ သောင်း ခွဲ ပါ။
Desktop နဲ့ စျေးတူတူလောက်ပဲ။ (စွမ်းဆောင်ရည်ချင်းတူပြီး၊ လွယ်အိတ်ဖိုးရယ်၊ DVD Drive ရယ်၊ Webcam ရယ် ပေါင်းလိုက်ရင်......)
wireless တောင် အဆစ်ပါလိုက်သေး....ကဲ...
ကျတော်လဲ လက်တော့ ၀ယ်ချင်တယ်ဗျာ... ၅ သိန်းခွဲလောက်ပဲသုံးနိုင်တယ်....ရုံးသုံးအတွက်၀ယ်ချင်တာပါ...
Lenovo G560 0679AKU Core i3 ရဲ့အားနည်းချက် အားသာချက်ကို သိတဲ့သူရှိရင် ရှင်းလင်ပေးပါဦး